कतार विश्वकपमा प्रयोग हुने ‘बल’मा इतिहासकै छिटो गुड्ने क्षमता ! – Karnalikhabar
कतार विश्वकपमा प्रयोग हुने ‘बल’मा इतिहासकै छिटो गुड्ने क्षमता !
काठमाडाैँ । आगामी नोभेम्बरमा कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबलको आधिकारिक बल सार्वजनिक गरिएको छ । खेलकुदका सामग्री निर्माता कम्पनी एडिडासले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि बनाएको १४औँ बल बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
एडिडासले २०२२ विश्वकपको लागि आफ्नो आधिकारिक म्याच बललाई ‘अल रिल्हा’ नाम दिएको छ । बलमा प्रयोग गरिएको ‘अल रिल्हा’को अरबीमा ‘दि जर्नी’ र यसको अर्थ कतारको संस्कृति, वास्तुकला, प्रतिष्ठित ढुङ्गा र झन्डाबाट प्रेरित रहेको छ । यो बललाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा उच्चस्तरीय ल्याबमा परीक्षण गरिएको र इतिहासकै सबैभन्दा छिटो गुड्न सक्ने, हावामा पनि यसको गति अरू बलकोभन्दा बढी रहेको एडिडासको दाबी छ ।
एडिडासको फुटबल ग्राफिक्स र हार्डवेयर विभागमा डिजाइन निर्देशक फ्रान्जिस्का लोफेलम्यानले बलको मुख्य विशेषताहरूको सारांश प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनले भनेकी छन्- ‘खेल छिटो हुँदै गइरहेको छ, र यसको गति बढ्दै जाँदा, सटिकता र उडान स्थिरता गम्भीर रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ डिजाइनले बललाई हावामा उच्च गति कायम राख्न सक्छ ।’
‘अल रिल्हा’ विशुद्ध रूपमा पानीमा आधारित मसी र ग्लुबाट बनाइएको छ, जुन विश्वकप मोडेलको लागि पहिलो हो । बल आधिकारिक रूपमा adidas.com र कम्पनीको खुद्रा स्टोरहरूमार्फत ३० मार्चदेखि नै खरिदको लागि उपलब्ध रहेको बताइएको छ । फिफाका मार्केटिङ डाइरेन्टर जिन पाथेले यो बल उत्कृष्ट र लामो सयसम्म टिक्ने र उच्च गुणस्तरको रहेको बताए ।
यसपटकको विश्वकप इतिहासमै पहिलोपटक विन्टर सिजन (नोभेम्बर २१ देखि डिसेम्बर १८ सम्म) कतारमा हुँदैछ । यसपटकको विश्वकपमा हालसम्म आयोजक कतारसहित २७ राष्ट्रहरू छनोट भइसकेका भएका छन् । अब पाँच टोलीको छिनोफानो हुन बाँकी छ ।
अघिल्लो - मेलम्ची सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण
देउवा अनावश्यक मानिसहरुसहितको जम्बो टोली लिएर आज दिल्ली जाँदै - पछिल्लो